ပါမစ်မြေကို ၀ယ်ယူလျှင် ဘာတွေစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်သလဲ။ မည်သို့ ဂရန်လျှောက်ထားရမလဲ? - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
5 Dec 2019 2:13 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
4477 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
ပါမစ် မူရင်းတွင် ပါဝင်သည့် စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်များ
- မြေယာဌာန၏ ရုံးတံဆိပ်အဝိုင်း ရိုက်နှိပ်ထားသည့် မြေကွက်အမည်ပေါက် (သို့မဟုတ်) မိသားစုဓာတ်ပုံမူရင်း၊
- ဓာတ်ပုံနောက်ကျောတွင် မြေယာဦးစီးမှူး၏ လက်မှတ်ပါရှိရမည်။
- ရွှေ့ပြောင်းမည့်သူများ၏ ရာဇ၀င်အကျဉ်း
- မြေနေရာချထားပေးခံရသူ၏ မှီခိုသူများစာရင်း စသည်တို့ပါရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
ပါမစ်ကို မြေငှားဂရန်လျှောက်ထားလျှင် လိုအပ်မည့်စာရွက်စာတမ်းများ
- ပါမစ်အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူမှ အဆင့်ဆင့်လွှဲပြောင်းရောင်းချသည့် အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ်အဆက် ဆက်မူရင်း။
- အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များပါဝင်သည့် ပါမစ်မူရင်း။
- လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ။
- အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား။ (ဓာတ်ပုံ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်)
- နောက်ဆုံးထမ်းဆောင်ထားသည့် မြေငှားခပြေစာ (သို့မဟုတ်) ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်း မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံစာ။
- မြေကွက်အကျယ်အ၀န်းသည် အနည်းဆုံး ပေ၂၀×ပေ၆၀ (စတုရန်ပေ ၁၂၀၀) ရှိရမည်။
- လိုအပ်ပါက ကော်မတီ၏အတည်ပြုချက် ရယူရပါမည်။
အထက်ပါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ပြည်စုံပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတွင် ဂရန်သစ်လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီက မြေငှားဂရန်စာချုပ် (၃)စောင် ပြုစု၍ အငှားချထားသူနှင့် အငှားချထားခံရသူ၊ အသိသက်သေ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ မူရင်းတစ်စောင်၌ တံဆိပ်ခေါင်းကပ်၍ အငှားချထားခံရသူအား ထုတ်ပေးပါသည်။ ကျန်မူရင်းခွဲ (၂)စောင်ကို ဌာနတွင် မှတ်တမ်းအဖြစ် ထားရှိပါသည်။
မြေချပါမစ်ဆိုသည်မှာ စည်ပင်မှုမရှိသည့် မြို့သစ်ဒေသများတွင် အိမ်ရာဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် စည်းကမ်းချက်တွေ သတ်မှတ်များချပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်ပြုကြရာတွင် ပါမစ်မြေကို အရောင်းအဝယ် အများဆုံးပြုလုပ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရောင်းအားကောင်းရသည့် အကြောင်း အရင်းမှာ ပါမစ်မြေရောင်းအားကောင်းရခြင်းမှာ စရိတ်ကုန်ကျမှုနည်းခြင်းသည် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ကို အရပ်ကတိစာချုပ်ဖြင့်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ အဆင့်ဆင့်လွှဲပြောင်း ရောင်းချနိုင်သည်။ အရောင်းအဝယ် အဆက်အစပ် ကွင်းဆက်မပြတ် အရောင်းအဝယ်ကတိစာချုပ်များရှိရန်သာ လိုသည်။ ပါမစ်ကို ၀ယ်သူသည့်အခါတွင် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ပါမစ်တစ်စောင်တွင် ပါဝင်ရမည့်အချက် အလက်များကို သေချာစွာစစ်ဆေးရန်၊ စာချုပ်အဆက်ဆက်သည့် ချိတ်ဆက်မိ/မမိ၊ စာချုပ်များသည့် မမှန် မကန်ပြုလုပ်ထားခြင်းရှိ/မရှိဆိုတဲ့ ကိစ္စများသည် အရေးကြီးကိစ္စများဖြစ်ပါသည်။ ပါမစ်ကို ဂရန်လျှောက်ထားခြင်းသည် အချိန်ကာလအားဖြင့်တော့ (၆)လမှ (၈)အတွင်းကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
မြေချပါမစ် မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ပေးခြင်း
စာရွက်စာတမ်းများတွင် အတုအစစ်ရှိနိုင်သဖြင့် မြေချပါမစ်မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးလိုကြပေသည်။ ထို့ကြောင့် ပါမစ်မြေကွက်ကို ဝယ်ယူရန် စရန်ပေး လိုက်သည်နှင့် ရောင်းသူ၏ လက်ဝယ်ရှိ မြေချပါမစ်မှာ အစစ် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မြေယာဌာနနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတို့တွင် ပြသစစ်ဆေးခြင်းများပြုကြသည်။ မြေချပါမစ်ဝယ်သူများအနေ ဖြင့် ယခင်က မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုး ရေး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေး မှူးလက်မှတ်နှင့် စည်းတံဆိပ်ရိုက် နှိပ်ထုတ်ပေးသော ပါမစ်မြေနှင့် ယခု မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး လက်မှတ်နှင့် စည်း တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ပေးသော ပါမစ် မြေဟု ပုံစံ နှစ်မျိုးရှိနေသောကြောင့် သတိပြုဝယ်သင့်ပေသည်။
ပါမစ်မြေကွက် (အိမ်ရာဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်မြေကွက်)သည် လွှဲပြောင်းရောင်းချပိုင်ခွင့် မရှိတာကြောင့် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးက မှတ်ပုံတင်အရောင်းစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပေးခြင်းမရှိပါဘူး။ ထို့ကြောင့် အရောင်းအဝယ်ကတိစာချုပ်အဖြစ်သာ ချုပ်ဆိုကြပြီး မြေဂရန်သစ်တွေ လျှောက်ထားလေ့ ရှိပါ တယ်။ မြေဂရန်လျှောက်ထားရာတွင် အဆိုပါမြေကွက်ပေါ်မှာ အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်သောကြောင့် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အိမ်ရာဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပါမစ်မြေကို ဝယ်လျှင် ဥပဒေနှင့်အညီ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရသေးပါဘူး။ အရောင်းအဝယ် အရပ်ကတိစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ ဂရန်သစ်လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါတယ်။ ထိုသို့လျှောက်ထားပြီး မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဂရန်သစ်ထုတ်ပေးသည့်အချိန်မှသာ တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာမှာဖြစ်ပါသည်။
iMyanmarHouse.com ၏ ဥပ​ဒေအကြံ​ပေး ပညာရှင်​အဖွဲ့ မှ အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။ Credit: iMyanmarHouse.com
ပါမဈမွကေို ဝယျယူလြှငျ ဘာတှစေဈဆေးဖို့လိုအပျသလဲ။ မညျသို့ ဂရနျလြှောကျထားရမလဲ ?
ပါမဈ မူရငျးတှငျ ပါဝငျသညျ့ စာရှကျစာတမျးအခကျြအလကျမြား....
- မွယောဌာန၏ ရုံးတံဆိပျအဝိုငျး ရိုကျနှိပျထားသညျ့ မွကှေကျအမညျပေါကျ (သို့မဟုတျ) မိသားစုဓာတျပုံမူရငျး၊
- ဓာတျပုံနောကျကြောတှငျ မွယောဦးစီးမှူး၏ လကျမှတျပါရှိရမညျ။
- ရှပွေ့ောငျးမညျ့သူမြား၏ ရာဇဝငျအကဉျြး
- မွနေရောခထြားပေးခံရသူ၏ မှီခိုသူမြားစာရငျး စသညျတို့ပါရှိမှာဖွဈပါသညျ။
ပါမဈကို မွငှေားဂရနျလြှောကျထားလြှငျ လိုအပျမညျ့စာရှကျစာတမျးမြား-
- ပါမဈအမညျပေါကျပိုငျဆိုငျသူမှ အဆငျ့ဆငျ့လှဲပွောငျးရောငျးခသြညျ့ အရောငျးအဝယျစာခြုပျအဆကျ ဆကျမူရငျး။
- အထကျတှငျ ဖျောပွထားသညျ့ အခကျြအလကျမြားပါဝငျသညျ့ ပါမဈမူရငျး။
- လြှောကျထားသူ၏ နိုငျငံသားစိစဈရေးကတျပွားမိတ်တူ။
- အဆောကျအဦဆောကျလုပျပွီးကွောငျး အထောကျအထား။ (ဓာတျပုံ၊ ရပျကှကျထောကျခံခကျြ)
- နောကျဆုံးထမျးဆောငျထားသညျ့ မွငှေားခပွစော (သို့မဟုတျ) ကွှေးကနျြကငျးရှငျးကွောငျး မွို့နယျ စညျပငျသာယာအုပျခြုပျရေးမှူးထောကျခံစာ။
- မွကှေကျအကယျြအဝနျးသညျ အနညျးဆုံး ပေ၂၀×ပေ၆၀ (စတုရနျပေ ၁၂၀၀) ရှိရမညျ။
- လိုအပျပါက ကျောမတီ၏အတညျပွုခကျြ ရယူရပါမညျ။
အထကျပါစာရှကျစာတမျးအထောကျအထားမြား ပွညျစုံပါက ရနျကုနျမွို့တျောစညျပငျသာယာရေး ကျောမတီ၊ မွို့ပွစီမံကိနျးနှငျ့မွစေီမံခနျ့ခှဲမှုဌာနတှငျ ဂရနျသဈလြှောကျထားရမှာဖွဈပါသညျ။ သတျမှတျခကျြနှငျ့ ကိုကျညီက မွငှေားဂရနျစာခြုပျ (၃)စောငျ ပွုစု၍ အငှားခထြားသူနှငျ့ အငှားခထြားခံရသူ၊ အသိသကျသေ လကျမှတျရေးထိုး၍ မူရငျးတဈစောငျ၌ တံဆိပျခေါငျးကပျ၍ အငှားခထြားခံရသူအား ထုတျပေးပါသညျ။ ကနျြမူရငျးခှဲ (၂)စောငျကို ဌာနတှငျ မှတျတမျးအဖွဈ ထားရှိပါသညျ။
မွခေပြါမဈဆိုသညျမှာ စညျပငျမှုမရှိသညျ့ မွို့သဈဒသေမြားတှငျ အိမျရာဆောကျလုပျဖို့အတှကျ စညျးကမျးခကျြတှေ သတျမှတျမြားခပြေးထားခွငျးဖွဈပါတယျ။ အိမျခွံမွေ အရောငျးအဝယျပွုကွရာတှငျ ပါမဈမွကေို အရောငျးအဝယျ အမြားဆုံးပွုလုပျကွသညျကို တှရေ့သညျ။ ရောငျးအားကောငျးရသညျ့ အကွောငျး အရငျးမှာ ပါမဈမွရေောငျးအားကောငျးရခွငျးမှာ စရိတျကုနျကမြှုနညျးခွငျးသညျ အဓိကအခကျြဖွဈသညျ။
အရောငျးအဝယျစာခြုပျကို အရပျကတိစာခြုပျဖွငျ့ခြုပျဆိုနိုငျသညျ။ အဆငျ့ဆငျ့လှဲပွောငျး ရောငျးခနြိုငျသညျ။ အရောငျးအဝယျ အဆကျအစပျ ကှငျးဆကျမပွတျ အရောငျးအဝယျကတိစာခြုပျမြားရှိရနျသာ လိုသညျ။ ပါမဈကို ဝယျသူသညျ့အခါတှငျ အထကျတှငျဖျောပွထားသညျ့ ပါမဈတဈစောငျတှငျ ပါဝငျရမညျ့အခကျြ အလကျမြားကို သခြောစှာစဈဆေးရနျ၊ စာခြုပျအဆကျဆကျသညျ့ ခြိတျဆကျမိ/မမိ၊ စာခြုပျမြားသညျ့ မမှနျ မကနျပွုလုပျထားခွငျးရှိ/မရှိဆိုတဲ့ ကိစ်စမြားသညျ အရေးကွီးကိစ်စမြားဖွဈပါသညျ။ ပါမဈကို ဂရနျလြှောကျထားခွငျးသညျ အခြိနျကာလအားဖွငျ့တော့ (၆)လမှ (၈)အတှငျးကွာမွငျ့မှာ ဖွဈပါသညျ။
မွခေပြါမဈ မှနျကနျမှု ရှိ/မရှိ စိစဈပေးခွငျး
စာရှကျစာတမျးမြားတှငျ အတုအစဈရှိနိုငျသဖွငျ့ မွခေပြါမဈမှနျကနျမှု ရှိ/မရှိ စဈဆေးလိုကွပသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ ပါမဈမွကှေကျကို ဝယျယူရနျ စရနျပေး လိုကျသညျနှငျ့ ရောငျးသူ၏ လကျဝယျရှိ မွခေပြါမဈမှာ အစဈ အမှနျဖွဈကွောငျး သကျဆိုငျရာ မွို့ပွနှငျ့အိမျရာဖှံ့ဖွိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မွယောဌာနနှငျ့ ရနျကုနျမွို့တျောစညျပငျ သာယာရေးကျောမတီ၊ မွို့ပွစီမံကိနျးနှငျ့မွစေီမံခနျ့ခှဲမှုဌာနတို့တှငျ ပွသစဈဆေးခွငျးမြားပွုကွသညျ။ မွခေပြါမဈဝယျသူမြားအနေ ဖွငျ့ ယခငျက မွို့ရှာနှငျ့ အိုးအိမျဖှံ့ဖွိုး ရေး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညှနျကွားရေး မှူးလကျမှတျနှငျ့ စညျးတံဆိပျရိုကျ နှိပျထုတျပေးသော ပါမဈမွနှေငျ့ ယခု မွို့ပွနှငျ့ အိမျရာ ဖှံ့ဖွိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ညှနျကွားရေးမှူး လကျမှတျနှငျ့ စညျး တံဆိပျရိုကျနှိပျထုတျပေးသော ပါမဈ မွဟေု ပုံစံ နှဈမြိုးရှိနသေောကွောငျ့ သတိပွုဝယျသငျ့ပသေညျ။
ပါမဈမွကှေကျ (အိမျရာဆောကျလုပျနထေိုငျခှငျ့လကျမှတျမွကှေကျ)သညျ လှဲပွောငျးရောငျးခပြိုငျခှငျ့ မရှိတာကွောငျ့ စာခြုပျစာတမျးမှတျပုံတငျရုံးက မှတျပုံတငျအရောငျးစာခြုပျကိုခြုပျဆိုပေးခွငျးမရှိပါဘူး။ ထို့ကွောငျ့ အရောငျးအဝယျကတိစာခြုပျအဖွဈသာ ခြုပျဆိုကွပွီး မွဂေရနျသဈတှေ လြှောကျထားလေ့ ရှိပါ တယျ။ မွဂေရနျလြှောကျထားရာတှငျ အဆိုပါမွကှေကျပျေါမှာ အဆောကျအဦဆောကျလုပျထားပွီးဖွဈဖို့ လိုအပျသောကွောငျ့ အဆောကျအဦ ဆောကျလုပျထားလေ့ ရှိပါတယျ။
ထို့ကွောငျ့ အိမျရာဆောကျလုပျနထေိုငျခှငျ့လကျမှတျ ပါမဈမွကေို ဝယျလြှငျ ဥပဒနှေငျ့အညီ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ မရသေးပါဘူး။ အရောငျးအဝယျ အရပျကတိစာခြုပျခြုပျဆိုပွီးတော့ ဂရနျသဈလြှောကျထားခှငျ့ရှိပါတယျ။ ထိုသို့လြှောကျထားပွီး မွို့တျောစညျပငျသာယာရေးကျောမတီမှ ဂရနျသဈထုတျပေးသညျ့အခြိနျမှသာ တရားဝငျ ပိုငျဆိုငျမှုခိုငျမာမှာဖွဈပါသညျ။
ပါမစ် ဂရန် မြေ အိမ်ခြံမြေ ဗဟုသုတ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
For Sale, Hlaing Township ( လှိုင်2ရပ်ကွက်)
United Living Mall အနီး ပြားရညျကုနျးလမျး တိုကျခနျး ‌
မွောကျဒဂုံ ၃၂-ရပျကှကျ ဘုရငျ့နောငျလမျးကြောကပျ၊...
985 သိန်း (ကျပ်)
၁၈x၅၅ ပေ ၊ ၄ လှာ တိုကျခနျး (အသငျ့နထေိုငျနိုငျ)
To rent at Sanchaung Township